ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရရှိရေး အတွက် သူမရဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အတူတူ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရရှိရေး အတွက် သူမရဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အတူတူ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း
ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရရှိရေး အတွက် သူမရဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အတူတူ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း
ပရိသတ်တွေ ငယ်စဉ် ကတည်းက အားပေး ချစ်ခင် ကြရတဲ့ ယွန်းယွန်းက အသက် (၂၁) ကျော် အပျိုဖြန်းလေး တစ်ယောက် ဖြစ်လို့နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။။ အသက်အရွယ် တစ်ခုကို ရရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ ယွန်းယွန်းက အခုဆိုရင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာ ပညာ သင်ကြားနေရင်း တစ်ဖက်မှာလည်း အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေ ကို လက်လှမ်းမှီသလောက် လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မှာတော့ ယွန်းယွန်းက ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားချိန်မှာ အနုပညာအလုပ်တွေရော ပညာရေ းကိုပါ ရပ်နား ထားပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ်ရရှိရေး အတွက် ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးဆက်သစ်လူငယ် တစ်ယောက် ပီပီ အနာဂတ် အတွက် အညွှန့်တလူလူတက် နေချိန်မှာ အမှောင်ဖုံးစနစ်ကြီးထဲ မရောက်စေဖို့ ယွန်းယွန်းက ဆန္ဒပြနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ယွန်းယွန်းက သူမရဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆန္ဒပြဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကို “စာမေးပွဲနီးရင် စာတွေကျက်ခဲ့ ကြတော့လဲတူတူပဲ။ အတန်းတွေလစ်ပြီး canteenထိုင်ခဲ့ကြတော့လဲတူတူပဲ။ အနာဂတ်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်တော့လဲ တူတူပဲ ✊🏻🤍🕊 Proud of you our YUers, Psychology 4th batch 💯” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာကနေပြောလာပါတယ်။
ယွန်းယွန်း ကတော့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ် တစ်ယောက်ပီပီ အနာဂတ်မှာ အမှောင်မကျစေဖို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက္ပါတယ်နော်။
Source: Yoon Yoon ‘s fb
ပရိသတ္ေတြ ငယ္စဥ္ ကတည္းက အားေပး ခ်စ္ခင္ ၾကရတဲ့ ယြန္းယြန္းက အသက္ (၂၁) ေက်ာ္ အပ်ိဳျဖန္းေလး တစ္ေယာက္ ျဖစ္လို႔ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။။ အသက္အ႐ြယ္ တစ္ခုကို ရရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ ယြန္းယြန္းက အခုဆိုရင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွာ ပညာ သင္ၾကားေနရင္း တစ္ဖက္မွာလည္း အႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြ ကို လက္လွမ္းမွီသေလာက္ လုပ္ကိုင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ မွာေတာ့ ယြန္းယြန္းက ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ထားခ်ိန္မွာ အႏုပညာအလုပ္ေတြေရာ ပညာေရ းကိုပါ ရပ္နား ထားၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရရွိေရး အတြက္ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ တစ္ေယာက္ ပီပီ အနာဂတ္ အတြက္ အၫႊန႔္တလူလူတက္ ေနခ်ိန္မွာ အေမွာင္ဖုံးစနစ္ႀကီးထဲ မေရာက္ေစဖို႔ ယြန္းယြန္းက ဆႏၵျပေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း ယြန္းယြန္းက သူမရဲ႕ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဆႏၵျပျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကို “စာေမးပြဲနီးရင္ စာေတြက်က္ခဲ့ ၾကေတာ့လဲတူတူပဲ။ အတန္းေတြလစ္ၿပီး canteenထိုင္ခဲ့ၾကေတာ့လဲတူတူပဲ။ အနာဂတ္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေတာ့လဲ တူတူပဲ ✊🏻🤍🕊 Proud of you our YUers, Psychology 4th batch 💯” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာကေနေျပာလာပါတယ္။
ယြန္းယြန္း ကေတာ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ တစ္ေယာက္ပီပီ အနာဂတ္မွာ အေမွာင္မက်ေစဖို႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုကၸါတယ္ေနာ္။
Previous post စိတ် ဓာတ် ကျ နေ ကြ ပြီ လား ? ? ?
Next post သူမကို ဒီချိန်မှာ ပါတီစွဲမလုပ်ရဘူး လို့ လာပြောတဲ့ သူကို တိကျပြတ်သားတဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ချက်ကျ လက်ကျ ထောက်ပြ ပြောဆို လိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်